Inona moa ny Académie Fahombiazana ?
Ny Académie Fahombiazana dia sehatra iray eto amin’ny Internet ahafahanao mianatra ireo teknika manampy anao ahita fahombiazana eo amin’ny fiainana. Natokana ho an’ny Malagasy tanteraka izy inty ary amin’ny teny Malagasy ihany no ifandraisana eto (na dia mety mampiasa teny vahiny kely aza indraindray eny an-tsefatsefany eny, mba mora ahazoana ny resaka).
Betsaka ireo zavatra azonao ianarana ato amin’ny Académie toy ny (santionany ihany ireto) :
Mianatra toy ny any amin’ny oniversite ireny no ataonao ato amin’ny Académie. Izany hoe misy « cours » omena anao (amin’ny endriny « texte » vakiana, na koa « audio » henoina, MP3, na koa vidéo, …).
Azonao atao ny mametraka fanontaniana, na koa mifanakalo hevitra mihitsy amin’ny mpampianatra.
Misy koa ireo fanadinana na fitsapam-pahaizana izay afaka ataonao mba hijerenao ny fahazoanao ireo fampianarana maro noraisinao.
Marihana fa malalaka tanteraka ianao ato amin’ny Académie ka afaka mijanona amin’izay fotoana tianao hijanonana, na koa manohy indray amin’ny fotoana tianao hanohizana.
Arakaraky ny fandehan'ny fotoana ny hirosoanao amin’ny fianarana. Isaky ny miditra volana iray vaovao ianao dia mazava ho azy fa fampianarana avo lenta kokoa, lalina kokoa hatrany no ho azonao. Kanefa koa, arakaraka ny maha avo lenta ireo fampianarana no ahatonga anao hivoatra kokoa amin’ny fampiharana azy ireo.